Cantona: Waxaan Manchester United u doorbidi lahaa Guardiola in uu tababbare u noqdo – Gool FM
Cantona: Waxaan Manchester United u doorbidi lahaa Guardiola in uu tababbare u noqdo
Kaafi November 25, 2017
(Manchester) 25 Nof 2017. Leyliyaha Mancehster City Pep Guardiola ayaa ahaa midka ku hoboonnaa qabashada xilka Mancehster United marka loo eego midka iminka hayya ee Jose Mourinho oo qaab difaaceedkiisa ka horimayo weerarkii sumadda u ahaa, sidaas waxaa yiri Eric Cantona.
Halyeyga United Cantona waxa uu ka caawiyey tababbirihii hore ee Man United Sir Alex Ferguson in ay ka dhigaan kooxda mid quwad ku leh England muddo shan sano ah oo uu 1990s-kii la joogay. Waxa ay wada qaadeen Afar Premier League iyo FA Cup-yo.
Walow Mourinho uu laba koob ku hogaamiyey United tan iyo markii uu sanad kahor kala wareegay Louis Van Gaal haddna waxaa indho badan soo jiidatay kooxda Pep Guardiola oo Kubadd dareere ah ciyaaarta.
“Ma fahmi karo sababta United ay u keentay tababbare qaab difaaceed dheela. Waan jeclahay Mourinho,laakiin waxaan doorbidayaa daawashada Barcelona,” ayuu Cantona u sheegay BBC Radio 5 Live.
“Waxaan doorbidaa sida uu Guardiola u dheelo, isaga ayaan u doorbidi laaa Manchester United in uu tababbare ka noqdo, waa midda ugu maqcuulsan, ma daawado Man City maxaa yeelay waa Man City laakiin waxaan jeclahay in aan daaado kooxaha uu maamulo Guardiola.”
Milan oo sahan u dirsatay Dembele
Messi: City iyo PSG waa kooxaha ugu wacan hadda